ओलीलाई उपेन्द्र यादव मात्रै चाहिने ! | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » ओलीलाई उपेन्द्र यादव मात्रै चाहिने !
ओलीलाई उपेन्द्र यादव मात्रै चाहिने !
SAHARA TIMES Saturday, March 3, 20180No comments
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि विभिन्न दलसँग छलफललाई तिब्रता दिएसँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको चर्चा पनि शुरु भएको छ ।
केही दिनमा हुन लागेको मन्त्रीमण्डल विस्तारमै फोरम नेपाल सहभागी गराउने एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको छ । फोरम नेपालले पनि सविधान संशोधनमा एमालेको स्पष्टता चाहेको छ ।
एमाले सविधान संशोधनमा अलि लचिलो भइ दिए फोरम नेपाल सरकारमा सहभागि हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारमा त्यतिकै सहभागि हुने अवस्थामा छैन । सरकारबाट केही नकेही ग्यारेण्टी फोरम नेपालले खोजेको छ । एमाले पनि सविधान संशोधनको विषयमा लचिलो हुन चाहेका छन् । यही सविधान संशोधनका कारण एमालेलाई मधेशमा निकै क्षति भएको छ । एमालेका लागि यही मौका हो, सविधान संशोधनमा मधेशलाई सम्बोधन गरेपछि मधेशमा उसको विरोधका स्वरहरु केही मथ्थर हुनेछ ।
एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले एमालेले सविधान संशोधनको विरोधी कहिल्यै थिएन, विरोधी शक्तिहरुले जानी जानी त्यस्तो देखाएको टिप्पणी गर्नुभयो । सविधान संशोधनका विषयमा आफूहरुसँग कहिल्यै कसले छलफल नगरेको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, सविधान संशोधनमा समर्थन गर्नलाई मात्र हामीलाई भनिन्थ्यो तर के मा गर्ने, कुन कुन विषयमा गर्ने त्यसमा कहिल्यै छलफल गर्न मानेन् । हामीलाई बालुवाटार पटक पटक बोलाउथ्यो भनिन्थ्यो, सविधान संशोधनमा समर्थन गर्नुस् तर केमा गर्नुस् कहिल्यै छलफल गर्न मानेन् ।’
छलफल र संवादको मार्फत एमाले पनि सविधान संशोनधकै पक्षमा रहेको तर त्यसका लागि छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । फोरम नेपालले सरकारमा आउन सकारात्मक रहेको छ तर उहाँहरुले सविधान संशोधनमा आफूहरुबाट स्पष्टता खोजेको उहाँले बताउनु भयो ।
फोरम नेपाल पनि एमालेलाई चिढाएर जाने पक्षमा छैन । केन्द्रमा वामपन्थीको सरकार बनिसकेपछि फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमालेप्रति लचिलो हुनुभएको छ । त्यसका लागि उहाँ प्रधानमन्त्री अ‍ोलीसँग पटक पटक छलफल गरिरहनु भएको छ ।
प्रदेश २ मा फोरम नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । सरकार चलाउनका लागि केन्दीय सरकारको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि पनि फोरम नेपाल केन्द्रीय सरकारमा सहभागि हुन चाहेको फोरम नेपालका एक नेताले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कुनै ठूलै दुर्घटना नभए पाँच वर्षसम्म वामपन्थी सरकार चल्ने निश्चित छ, उता हामीलाई पनि दुई नम्बर प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्नुछ । त्यो केन्द्रीय सरकारविना सम्भव छैन त्यसले हामी केन्द्रीय सरकारमा सहभागि हुन चाहेका छौं ।’
त्यसको शुरुवात प्रदेशबाट भएको छ । केन्द्र सरकारलाई फोरम नेपालले समर्थन गर्ने संकेत गरेपछि प्रदेशमा एमालेले फोरम नेपालाई पनि समर्थन गरेको छ । प्रदेश दुईका एमाले प्रदेश सांसद अशोक यादवले भन्नुभयो, हामीले प्रदेशमा फोरम नेतृत्वको सरकारलाई निशर्त समर्थन गर्यौं ।’ फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रदेश २ को सरकारलाई समर्थन गर्न एमाले र माओवादी केन्दसँग फागुन १० गते विहानैदेखि छलफल गर्नुभएको थियो ।
एमालेले प्रदेशमा समर्थन गरिसकेपछि फोरम नेपालले केन्द्रमा समर्थन गर्ने दवाव बढेको छ ।
फोरम नेपालको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका लालबाबु राउतले जेठ १० गते प्रदेश संसदमा आफ्नो विश्वास मत लिनुभयो । राजपा नेपाल र फोरम नेपालका ५४ सीटमध्ये एकजना सभामुख भएपछि ५३ सीट बाँकी रहेको छ । बहुमतका लागि एकसीट कम भएको छ । त्यसका लागि नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले समर्थन गर्ने भएको छ ।
काँग्रेसलाई पत्र नै लेखेर समर्थन गर्न मुख्यमन्त्री राउतले आग्रह गरिसकेका छन् ।
काँग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भन्नुभयो, फोरम नेपालले समर्थनका लागि आग्रह गरेको छ तर के आधारमा किन समर्थन गर्ने त्यसको बारेमा कुनै छलफल गरेको छैन । हामीले त्यतिके समर्थन गर्दैनौ, समर्थनको औचित्य पुष्टि हुने गरि फोरम नेपालले हामीलाई चित्त बुझाउनु पर्यो ।’
प्रदेश सभामा ११ सीट प्राप्त गरेका काँग्रेसले उपसभामुखको दावी गरेको थियो । तर, फोरम नेपालले उपसभामुख आफ्नै पार्टीबाट नियुक्त गरिसकेका छन् । अब काँग्रेसले कमसे कम एउटा मन्त्रालय चाहेको बताइएको छ । यस विषयमा फोरम नेपालले प्रष्ट हुनुपर्ने नेता रामसरोज यादवको दावी छ । फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले भन्नुभयो, सरकारमा सहभागि हुन फोरम नेपाललाई कुनै आपत्ति छैन तर सविधान संशोधनको विषयमा एमाले पार्टीले प्रष्ट पार्नुपर्छ । सविधान संशोधन हाम्रो बटमलाईन हो ।’
फागुन ७ गते फोरम नेपालका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री अ‍ोलीबीच बालुवाटारमा छलफल भएपछि एमाले र फोरम नेपालका दोस्रो तहका नेताबीच छलफल शुरु भएको हो । जेठ ९ गते दुई पक्षको बीचमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा उठेका विषयमा दुवै पक्षल आआफ्नो दलमा कुराकानी गर्ने अनि पुनः बस्ने सहमति गरेको थियो । उपेन्द्र यादव उपत्यका बाहिर रहेकाले फोरम नेपालका नेताहरुले छलफल गर्न सकेको छैन ।